Daawyanta qaaxada – somali
Ma jirto wax sababa oo aad u werwertaa. Qaaxada waa la daawayn karaa waana laga bogsan karaa tiiyoo la isticmaalaayo daawada, xaalado tiro yar mooyaane. Si kastaba ha ahaatee waxa lagama maarmaan ah in aad daawada u qaadatid si taxadar badan sida dhakhtarkaagu iyo kalkaaliahaagu kugula taliyeen.
Qaaxadu waa xanuun lagu daawayn karo daawooyin . Waxa loo baahan yahay daawooyin tiro badan si bakteeriyada loo dilo. Sidaas awgeed waxa aad qaadan dhawr daawo oo kala duwan isla mar. Daawooyinka ugu caansan ee loo isticmaalo daawaynta qaaxada waa:
Waxa ay qaadanaysaa muddo dheer si loo dilo dhamaan bakteeriyada. Waana sababta loo wadaayo daawada ugu yaraan lix bilood ama in ka badan muddo ka dheer. Sida badan afar daawo oo kala duwan ayaa la qaataa labada bilood ee ugu horeeya, intaas ka dib, daawaynta waxa lagu sii wadayaa laba daawo.
Waxa aad inta badan dareemi doontaa in aad fiican tahay marka aad qaadato daawada muddo dhawr todobaad ah. Bakteeriyada jidhka ku jirta weli way nooshahay. Xataa haddii aanad wax calaamad ah lahayn haba yaraatee, waxa muhiima in aad sii wadid qaadashada daawadaada illaa bakteeriyada oo dhan la baabiiyo ama la tirtiro.
Daawada waxa lagu bilaabaa isbitaalka waxana lagu sii wadaa guriga. Dhakhtarkaaga ayaa mas’uul ka ah qorshaynta daawadaada, xulashada daawada, qiyaasta laga qaadanaayo iyo mudada daawadu soconayso. Waxa aad waydiin kartaa dhakhtarkaaga maculuumaad gaara ee khuseeya daawaynta.
Daawada oo si toosa ah loola socdo in la liqay
Daawada qaaxada waxa lagu bixiyaa habka DOT oo loo tarjumaayo in toos loo hubinaayo in qofka daawada liqay.
Waxa aad xaq u leedahay inaad taageero iyo talo hesho muddada daawadu socoto oo dhan. Daawayntaa qaaxadu waxa ay qaadataa muddo dhawr bilood ah, daawada la cunayaana way badan tahay, sidaas awgeed ma dhib yara in daawada loo qaato si joogta ah. Ujeedada in daawada toos laguu liqsiiyo waa in lagugu caawiyo inaad daawada si joogta ah u qaadato, iyo in lala socdo dibaatada ka imaan karta daawada iyo in lagugu caawiyo sidii aad dhaqso ugu bogsan lahayd.
Daawada waxa aad u qaadanaysaa dariiqa ah, in qof kalaaliye caafimaad ama xirfadlyaal kale ay toos u eegayaan in aad liqday qiyaas kasta oo daawadaada ah. Isla markaas waxa ay la soconayaan, haddii daawadu kugu keentay wax dhibaato ah, waxa ay la soconayaan cafimaadkaaga waxana ay kaaga jawaabayaan su’aalahaaga. Haddii bukaanku yahay caruur, waalidka ayaa siinaaya daawada tiiyo uu qof shaqaalaha ka midi hubinaayo.
Dhahtarka mas’uulka ka ah daawaynta ayaa go’aaminaaya goorta la socodka tooska ah ee daawaynta la bilaabaayo iyo goorta la joojinaayo. Isbitaalka Kalkaaliye caafimaad ayaa eegaya marka aad daawadaada liqayso. Ka hor inta aan laguu fasixin in aad daawada ku qaadato guriga, waxa lagu heshiinayaa sidii aad daawada ugu qaadan lahayd guriga. Daawada waxa lagu qaadan karaa qaybta bukaan socodka ee isbitaalka, ama goob caafimaad ama bukaan- socod qaybta caafimaada shaqaalaha ama ama goob waxabarasho (Dugsi) ama xeryaha lagu qaabilo dadka qaxootinimada codsanaya. Haddii ay xaaladaadu u baahan tahay kalaaliye caafimaad, in uu la socdo daawayntaada guriga ama goob kale oo aad ku nooshay.
Hadii aad kala goyso qaadashada daawada, oo aad qaadan waydo qaar ka mida goorkasta waxay imanaysa khatar. Bakteriada qaaxadu way badnaysaa mudada daawayntaaduna way sii dheraanaysaa. Bakteriada qaaxaduna waxa ay noqonaysaa mid la qabsata daawada aad qaadnayso oo yeelata adagaysi. Waxa ay noqnaysaa in daawada laguu bedelo oo mid cusub lagu siiyo hadii tii hore aan waxab kuu tarayn. Waxa lagama maarmaan ah in daawada cusub la qaato mudo ka dheer tii hore, inta badana waxa ay sababaan dhibaatooyin ka sii adag tii daawadii hore.
Daawada qaaxada ee sida joogtada ah loo qaato ayuun baa si joogta ah u dabar go’yn karta bakteriada qaaxada.
Cudurka qaaxada waa ka bogsan kartaa hadii aad daawada sida lagu faray aad u qaadato.
Waad qaadanaysaa daawada xataa hadii aad dreemayso inaad fiicnaatay.
•	Qaadashada daawadu wax ay badbaadinaysa khatarta in cudurka la kala qaado.
Kulamada lugu dabagelaayo qaadashada daawada
Cudurka in aad ka bogsato waxa lagula soconayaa bukaan socdka isbitaalka 1-2 (bishii ama labadii biloodba inta ay daawadu socoto). Waqtigaas baadhitaanada la samaynaayo waxa ka mida sawirka raajada ee feedhaha, baadhitaanka dhiiga iyo baadhitaanka candhuufta ama xaakada oo lagaaqaadayo adoo soo qufacaaya. Waxa kale oo waqtigaas kuu suurtagal ah in aad dhakhtarka su’aalo waydiiso.